Saturday March 10, 2018 - 11:17:45 in Wararka by Super Admin
Tan iyo markii Xasan Cali Kheyre uu ganafka ku dhuftay heshiiskii sedax geesoodka ahaa ee dhax maray shirkadda DP World, Maamulka Somaliland iyo dowladda Itoobiya ee ay ku kala qeyb sadeen dhaqaalaha dekadda Berbera ayuu sii xumaanayay cilaaqaadka u dhaxeeya labada dhinac.
Wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraatka Carabta Anwar Qarqaash ayaa war uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in Dowladda Federaalka ay halis gelinayso shacabka Soomaalida isagoo carrabka ku dhuftay in dowladda Qadar ay lacago siinayso Farmaajo si uu u xumeeyo cilaaqaadka kala dhaxeeya UAE.
Olole aad uballaaran oo dhanka warfaafinta ah ayay dowladda imaaraatka Carabta ku qaaday xukuumadda Farmaajo, warbaahinta ku hadasha Afka Imaaraatka Carabta ayaa baahisay silsiladdo warbixinno ah oo ku saabsan guuldarrada DF-ka iyo siyaasadaheeda jiha wareerinta ah.
Wargeyska Caanka ah ee Albayaan ayaa faafiyay warbixin uu ciwaan uga dhigay "Farmaajo wuxuu kala jarjarayaa Soomaaliya", warbixin kale oo warbaahinta imaaraatka Carabta ay faafisay ayaa lagu yiri "Farmaajo wuxuu gaajeysiinayaa carruurta soomaaliya isagoo adeegsanaya lacag laaluush ah oo dowladda Qadar uga timid".
Warbixinnadan ayaa lagu sheegay in tan iyo markii uu hoggaanka uqabtay DF-ka Max'med Cabdullaahi Farmaajo uu ammaanka wadanka faraha ka baxay islamarkaana uu kiciyay colaad qaab beeleed ku dhisan.
Saxafadda UAE oo soo xiganaysay warbixin kasoo baxday hay'adda HRW oo dowladda Federaalka ku eedaysay askareynta carruurta iyo musuq maasuq lagu sameeyay lacago ka yimid waxa loogu yeero beesha Caalamka.
Silsilladaha warbixinnada ah ee dowladda Imaaraatka ay sameysay fashilka maamulka Farmaajo waxaa kamid ah in isqab qabsi dhanka siyaasadda ah uu hareeyay maamulka Muqdisho islamarkaana labeegsaday siyaasiyiin uu kamid yahay Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur.
Khilaafka u dhaxeeyo Abu Dhabi iyo Muqdisho ayaa salka ku hayo arrimo dhaqaale iyo dhibaatada ka dhax jirta dowladaha khaliijka waxaana larumeysanyahay in dowladda Qadar ay Farmaajo ku cadaadineyso in uu jaro cilaaqaadka kala dhaxeeyo Imaaraatka